Ebolowa: chimbudzi chevanhu vose chakashandurwa kuva mizariro - TELES RELAY
HOME » kambani Ebolowa: zvigaro zvepaguru zvakachinjwa kuva mazariro
Yakagadzirirwa kugadzirisa dambudziko redzimba dzevanhu munharaunda yekumaodzanyemba kwenharaunda idzi zvivako zvisati zvamboiswa mubasa neRugan Community of Ebolowa inoitika nhasi mazariro.
Ichokwadi hachisi chinhu chinoshamisa asi hachisi chitsva muguta reEbolowa. Makore mashomanana apfuura, zvivako zvepaguru paAn 2000 migwagwa zvakatengeswa kune mumwe mutengesi akaisa denga ipapo uye nzvimbo iyi ikozvino bhabhi. Makore mushure meEbolowa Urban Community inodzoka zvakare. Panguva ino zvimbudzi zvevanhu zvakavakirwa mukurumbira wehukuru-pastoral comice yeEbolowa haasati yamboiswa mubasa uye zvinoshandiswa kushandiswa semagariro.
Nakisisa sezvo Patrick Messanga Abessolo capita Ebolowa, "apo tinoziva kuoma kwazvakaita kuvasunungura pachavo kana munhu ari muguta Ebolowa riri zvinoshamisa uye anosiririsa muzinda kuwana kuti isingawanzowanikwi omunharaunda yakavakwa uye akashongedzerwa kushumira zvimbudzi anowanikwa rendi nemba nebhizimisi Eenhede. Beer uye muto rwapedzwa chimbuzi haugoni kuona pana Ebolowa. " An zvisati mamiriro ezvinhu kuti enchants vanhu vari remunharaunda guru South.
KwaAlexis Obama Onana, "iyo inonyangadza. Ini ndinopokana kuti ndiye magistrate wokutanga weguta ari iye mukuru weizvi zvingaitika kana zvingave zvapera uye tinoshevedza kurega kwake ".
Migumisiro yemadzinza Ebolowa inoramba isingashandisi mudzimba dzevashandi vevanhu.Vanhu vanomanikidzwa kushandisa nzira dzekukwanisa kuzvidzora ivo pachavo. Iyi ibasa rakaoma revakadzi kuti vagadzirise. Mamiriro ezvinhu anokonzera dambudziko rechokwadi rehutsika muguta reEbolowa.
Maererano François Assako "ichi nokushandiswa uye kushandiswa voruzhinji nzvimbo zvimwe zvinangwa nokuda sakodzera zvikonzero isu chete shure apo vamwe vanoti ndiyo guru rokupedzisira mudunhu pashure mbiri kare."
Ndizvo nemisodzi kuti Magloire Essono wenhau rinovayeuchidza peji ino yerima munhoroondo netaundi Ebolowa "zvimbudzi vasiri pakupedzisira kuita umbozha kwatiri muguta vemumusha? Kunyange zviri chii ezvinhu ndivo? "
Ebolowa inoshanda zvakasimba kushanda nesimba kuti ichengetedze maitiro ayo eguta rakaora chimp. Chimiro chechijorative chinonamatira paganda kuburikidza nemafambiro evanhu varo uye kunyanya vakuru veguta.
Par Consty ZANG in Ebolowa | Actucameroun.com
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/05/17/ebolowa-des-toilettes-publiques-transformees-en-bars/